Uterqüe wuxuu soo bandhigayaa A la Fresca, gurigeeda cusub ee daabacaadda SS21 | Bezzia
Maria vazquez | 07/04/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Uterqüe waxay dhowaan soo bandhigtay «A la Fresca», tifaftire cusub oo ururiya soo jeedinta shirkadda ee xilli-ciyaareedkaan cusub ee gu'ga-xagaaga 2021 ee aan hadda bilownay. Soo-jeedinno leh shaqsiyaad aad u kala duwan oo soo bandhigaya go'aan qaadasho iyo yididiilo.
Astaamaha mustaqbalka iyo xusuusta todobaatameeyadii waxay ku midoobi doonaan tifaftirkaan cusub oo aan ku qiimeyneyno illaa seddex isbeddel. Midka koowaad wuxuu u adeegsadaa madow iyo caddaan qaababka dabiiciga ah iyo faahfaahinta. Midda labaad waxay u heellan tahay hal-abuurka iyo soo-koobidda joomatari. Tan saddexaadna?
1 Madow iyo caddaan
2 Sawirada sawirada
3 Midab iyo jaantus qaab
Isku darka dharka iyo faahfaahinta daabacaad lagu dhiirrigeliyey qaababka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ku xidho dharka madow iyo caddaan ee madbacadda cusub. Bezzia waxaan si gaar ah u jecel nahay isku-dhafka dharka maqaarka ee indhaha iyo shaati-gacmeedka dharka leh. Laakiin kama baaqi karno inaan xusno labiska midkoodna, sababo la xiriira dharbaaxadooda.
Daabacadaha Checkered laguma ogaanayo soo-jeedinta cusub ee Uterqtere. In kasta oo aynaan ka hadlin oo keliya daabacadaha la jeexay, maaddaama aan sidoo kale ka helno daabacaad kale oo laba-midab leh oo soo-jeedinta ah: houndstooth. Labadaba waxaa lagu daraa dharka loo yaqaan 'poplin boodboodyada' iyo 'blouses', funaanado cudbi ah iyo funaanado tolmo leh ... Oo intaas oo dhanna waa cagaar qurux badan, buluug iyo lilac.
Midab iyo jaantus qaab
Hal-abuurnimo iyo yididiilo ayaa lagu gartaa qaababka ugu dhiiranaanta leh ee guriga madbacadda A la Fresca. Inkasta oo ay tiro yar yihiin, daabacadaha zig zag ee midabbada dhalaalaya ha ogaanin. Xitaa ka yar marka la isku daro xariijimo si loo abuuro dhar kaliya oo ku habboon haweenka go'aamiya iyo kuwa isku kalsoon.
Dharka ku jilaya tifaftirkaan horey ayaa loogu soo daray buugga 'Uterqtere' iyo kuwa aan sida ugu dhaqsaha badan u sameyn doonin. Markaa haddaad dhar eegtay, wax badan ha ka fikirin haddii kale waad la'aanaysaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Uterqüe waxay soo bandhigaysaa A la Fresca, oo ah gurigeeda cusub ee daabacaada SS21